कोरोना दोहोरिएर संक्रमण हुदैन, संक्रमण भएकाले फेरी परिक्षण गराउनु पर्दैन – Pahilo Update
कोरोना दोहोरिएर संक्रमण हुदैन, संक्रमण भएकाले फेरी परिक्षण गराउनु पर्दैन
समाचारस्वास्थ्य जीबन शैली
By Desk On Nov 23, 2020
एक पटक कोरोना भाइरस लागिसकेपछि शरीरमा भाइरससँग लड्ने एन्टिबडी बनेको हुन्छ।केही अनुसन्धानले एन्टिबडी केही समयमा घटेर जान्छ भनेको छन्। तर शरीरको रोगसँग लड्ने सिस्टममा एक किसिमको तालिम प्राप्त सेल्सहरू शरीरको विभिन्न स्थानमा सञ्चित भएर बसेका हुन्छन्।
भाइरसले अर्को पटक आक्रमण गर्‍यो भने ती सेल सक्रिय भएर भाइरसलाई आक्रमण गर्न जान्छन् र उनीहरूले एन्टिबडी बनाउँछन्। त्यसैले एक पटक संक्रमण भइसकेपछि फेरि संक्रमण हुने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ।
एक पटक कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिलाई दोहोरिने सम्भावना कति हुन्छ?, दोहोर्‍याएर पिसिआर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालमा खोपको उपलब्धता कहिलेसम्म होला? सिटी भ्यालु थोरै र धेरै हुनुले के अर्थ राख्छलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।यस कुराकानीका मुख्य अंश यस्ता छन्:
– एक पटक संक्रमण भएपछि फेरि हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। संक्रमित ‍ भएर सिकिस्त हुने सम्भावना झनै कम हुन्छ।
-आफू सिकिस्त नभए पनि अर्को मान्छेलाई सार्ने खतरा भने हुन्छ। एक पटक निको भए भन्दैमा मास्क लगाउन छोड्ने, दूरी कायम गर्न छोड्न हुँदैन।
-आफू संक्रमित भएकाहरूले आफ्ना लागिभन्दा पनि परिवार र समाजका लागि बढी सचेत हुनुपर्छ। विश्वमा निकै कम मात्रामा दोहोरिएको छ।
-नेपालमा कोरोना भाइरस दोहोरिएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने प्रविधि पनि छैन।
– कोरोना भाइरसको लक्षण सुरू भएको १० दिनपछि पुन: पिसिआर नगरी बाहिर निस्किन सकिन्छ। त्यस्तै, सिटामोल नखाइकन ज्वरो घटेको ३ दिन भएको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अरूलाई असर गर्न सक्दैन।
– अक्सिजनको कमी भएर उपचार गरेकोलाई हामीले १४ दिन भन्ने गरेका छौं।
-भाइरस जीवित नभए पनि महिनौंसम्म पिसिआर पोजेटिभ देखिन सक्छ। त्यसैले दोस्रो पटक पिसिआर नगराएकै राम्रो हो।
-युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कहीँ पनि पुन: परीक्षण गरिँदैन। नेपाल र भारतमा मात्रै हो।
– कुनै पनि घरबेटी अनि अफिसले नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आइज भन्नु विज्ञानविरोधी र अमानवीय हो।
– होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले विभिन्न खालका औषधी खाइरहेका छन्। त्यो गलत हो। जथाभावी भिटामिन र एन्टिबायोटिक खाने गरिएको छ। यो गर्नु हुँदैन।कोरोना भाइरसका लागि कुनै भिटामिन र औषधी बनेको छैन। यो जथाभावी खाएमा यसले अरू असर गर्न सक्छ।
-घरमा आइसोलेसन बस्दा ज्वरो आयो भने प्यारासिटामोल आइनो प्रफिनलगायतका औषधी खान सकिन्छ। कफसिरफहरू खोकी लाग्दा खान सकिन्छ। झोलिलो पदार्थ खाने हो अरू खान पर्दैन।
-सिटी भ्यालुको खासै ठूलो अर्थ हुँदैन। यो थोरै हुनु र धेरै हुनुले बिरामीलाई सजिलो पार्ने र अप्ठ्यारो पार्ने होइन। सिटी भ्यालु जति भए पनि पोजेटिभ पोजेटिभ नै हो नेगेटिभ नेगेटिभ नै हो। यसको नम्बर हेरेर केही अनुमान गर्न मिल्दैन।
– खोपको जसरी विकास भइरहेको छ। यो एकदमै आशाप्रद छ तर हाम्रो देशमा कहिले आइपुग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। नेपालले गर्ने पहल र विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिने नीतिमा भर पर्छ। तर सर्वसुलभ हुन अझै एक डेढ वर्ष लाग्न सक्छ।
( यो सामग्री हामीले सेतोपाटी डटकमबाट साभार गरेका हौं । – सम्पादक )
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना, एकको मृत्यु एकको अवस्था गम्भिर